ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးဦးလှအေးက? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်၊ တရားသူကြီးဦးလှအေးကို ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ စတင်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့်ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အရေး ပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂ဝ၁၈) တတိယနေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူ ကြီးချုပ် ဦးလှအေးက လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌရှေ့မှောက်တွင် ကတိသစ္စာ ပြုကာ ကတိသစ္စာ ပြုလက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်၊ တရားသူကြီး ဦးလှ အေးအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏အမိန့်အမှတ်(၄၅/၂ဝ၁၈)ဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ခန့်အပ်တာ ဝန်ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း လွှတ် တော်သို့တင်ပြအပ်ပါသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်ထွန်းက ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်ကပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ”ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်၊ တရားသူကြီးဦးလှ အေးကို တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန် ပေးအပ်ခြင်းကို လွှတ်တော်က မှတ် တမ်းတင်ကြောင်း ကြေညာပါတယ်”ဟု ၎င်းကကြေညာခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင်ပြု လုပ်သည့် လွှတ်တော်အရေးပေါ် အစည်းအဝေး(၁/၂ဝ၁၈)ပထမ နေ့တွင် ဦးလှအေး၏အမည်စာ ရင်းတင်သွင်းခဲ့ကာဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ပြုလုပ်သောလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/ ၂ဝ၁၈)ဒုတိယနေ့တွင်လွှတ်တော်တွင် ကန့်ကွက်သူမရှိသဖြင့် သ ဘောတူကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေး အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တ ရားလွှတ်တော်၊ တရားသူကြီးချုပ် ဦးဝင်းဆွေမှာ သက်ပြည့်ပင်စင်ရ ယူသွားပြီဖြစ်သဖြင့် ၎င်းနေရာတွင် အသက်(၆၃)နှစ်အရွယ်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ် တော်၊ တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးဦးလှအေးကို ခန့်အပ်တာ ဝန်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ် တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးလှအေးသည် ဥပဒေဘွဲ့ရထားသူဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တွင် တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးရာထူးကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ကစတင်ရရှိကာ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်း တိုက်ခန်း သုံးသိန်းခန့် ရောင်းချရန် ကျန်နေသေး၊ ၂ဝ၁၉ နှစ်??
ရေသန့်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ နှာခေါင်းစည်း၊ လက်အိတ်၊ ခေါင်းဆောင်းများ တပ်ဆင် အလုပ် လုပ်ဆောင?
မျိုးကျော့မြိုင်၏ တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲ ရက်ပြောင်းရွှေ့ ပြုလုပ်မည်